Tsy marina ny vaovao tamin’ny tambazotran-tserasera fa natao sarika am-pandriana afak’omaly misasak’alina izy araka ny feo nandeha fa omaly maraina no nanamborana azy, hoy hatrany ny zandary. Noho ny tsiambaratelon’ny famotorana ara- pitsarana dia miandry ny fanomezan-dalana avy amin’ny fitsarana vao azo avoaka ny vaovao ka noho izany miandry ny fotoana mampety azy, hoy hatrany ny mpitandro filaminana.
Araka ny fampitam-baovao voaray moa dia resaka fanalam-baraka kandida hafa sy fandratrana olona no antony nakan’ny zandary azy sy nitazomana azy eny amin’ny tobin’ny zandary eny Ankadilalana. Raha tsiahivina ny zava-nisy dia nahatratra olona miisa 5 nitondra kara-panondro sandoka ny tenany sy ny fokonolona tao an-toerana ary nanery ny iray tamin’izy ireo hibaboka. Efa voatazona amin’ny polisy kosa ireto olona 5 voalaza ireto, raha ny fampitam-baovao hatrany.
J. Mirija sy Hajanirina